Indlela yokuKhawulezisa iMetabolism yakho kunye nokuNciphisa ubunzima bakho ngokukhawuleza Ukutya kukaNutri
Indlela yokukhawulezisa imetabolism
UMiguel Serrano | | Iingcebiso zokunciphisa umzimba, Isibonelelo sokutya
Ukwazi indlela yokukhawulezisa imetabolism yakho kunokuba luncedo kakhulu, ngakumbi ukuba unemetabolism ecothayo. Xa ingakhawulezi ngokwaneleyo imetabolism inokuba ngumqobo ekuthintelayo ekulahlekeni ubunzima obufunayo ngaphandle kwemizamo yakho.
I-Metabolism yindlela kunye nokulinganisa ukusetyenziswa komzimba wakho ukuguqula ukutya kumandla kwaye kukutshise. Ke ngoko, yinto ebangela ubunzima kunye namafutha omzimba. Ukongeza, iphawula isantya otyeba ngaso okanye unciphise umzimba. Fumana ukuba zeziphi izinto ezifanelekileyo kakhulu ekunikeni imetabolism yakho inyuse kwaye ke ukuqala ukutshisa iikhalori ezingaphezulu ngoku.
1 Zithini izizathu zetabolism ecothayo?
2 Izinto ezinceda ukukhawulezisa imetabolism
2.1 Ziqhelise ukwenza umthambo
2.2 Sela amanzi aneleyo
2.3 Sebenzisa ityuwa ene-iodized
2.4 Sela ikofu
2.5 Yitya ifibre ngakumbi
2.6 Sebenzisa iivithamini B, i-iron kunye ne-calcium
2.7 Kuphephe ukutya onganyamezeleki kuko
Zithini izizathu zetabolism ecothayo?
Njengoko usazi, kukho iindlela ezikhawulezayo zokuhamba kunye nokuhamba kancinci. Kungenxa yeso sizathu sokuba abanye abantu batye yonke into ngaphandle kokutyeba, ngelixa abanye beqaphela ngokukhawuleza ukutya okuthe kratya esinqeni. Kwaye kukuba ngokukhawuleza imetabolism, kokukhona inani leekhalori ezinokuthi zisetyenziswe ngaphandle kokubonwa kwisikali.
Isini, ubudala, kunye nobunzima bemisipha zezinye zezinto ezichaphazela inqanaba lokutya. Kodwa Eyona ndima inkulu kwinqanaba apho umzimba wakho utshisa iikhalori luya kudlalwa ngemfuza.
Abantu abane-metabolism ecothayo bahlala beyifumana njengelifa kubazali babo. Imetabolism ecothayo inokubangela iingxaki njengokutyeba kakhulu nokutyeba kakhulu. Kuba zichaphazela indlela umzimba osebenzisa ngayo amandla, Oku kulandelayo zezinye izizathu eziqhelekileyo zokucotha kwemetabolism:
Ukutya okunzima kakhulu, okunamafutha aphezulu, okanye okuphantsi kwee-carbohydrate
Ukutsiba ukutya okanye ukutshintsha amaxesha okutya rhoqo
Izinto ezinceda ukukhawulezisa imetabolism
Nangona kunjalo, kukho inani lemikhwa esempilweni enokukunceda ukukhawulezisa imetabolism yakho. Ke ukuba umzimba wakho uyacotha ukutshisa iikhalori ozisebenzisileyo, zama ezi ngcebiso zilula.
Ziqhelise ukwenza umthambo
Ukuzivocavoca kuthathwa njengenye yezona zicwangciso ezifanelekileyo zokukhawulezisa imetabolism yakho. Ukuhamba kunceda ukutshisa amanqatha, ukuqokelelwa kwawo okucothisa imetabolism yakho. Ikwakha izihlunu, nto leyo ebalulekileyo kwimetabolism, njengoko isihlunu onaso sisebenza ngokukhawuleza.
Ke dlala imidlalo ukuba awukabikho, uqinisekise ukuba hlanganisa umthambo we-aerobic kunye noqeqesho lwamandla. Ukuba sele wenze umthambo, fumana iindlela zokwazisa ngakumbi ngemithambo yomzimba kwindlela yakho yemihla ngemihla. Ukuphuma esihlalweni sakho rhoqo kwiiyure ezimbini ukolula kancinci kwaye wenze iplank okanye ezinye i-squats ngumbono olungileyo.
Ufumana njani ngakumbi kuqeqesho lwakho lwamandla
Imetabolism yakho inokucotha xa ungaseli manzi ngokwaneleyo. Isizathu kukuba I-H2O inokuchaphazela ukusetyenziswa kwamandla, ukukhuthaza ukunciphisa umzimba. Ungalibali ukuqinisekisa umzimba wakho ngamanzi awadingayo yonke imihla. Kwaye khumbula ukuba unokubonelela ngamanzi emzimbeni ngokutya okunempilo okuninzi. Umzekelo omkhulu ivatala.
Sebenzisa ityuwa ene-iodized
I-thyroid idinga iodine ukulawula imetabolism. Thenga ityuwa ene-iodized endaweni yetyuwa eqhelekileyo. Kuluvo olulungileyo ukuqinisekisa ukuba ukutya kwakho kubandakanya ukutya okunotye iodine, njengokuba kunjalo ngeemfene.
I-caffeine yenye yezona zinto zisebenzayo xa kuziwa ekuqaliseni i-injini ye-metabolic.. Iti iya kuvelisa iziphumo ezifanayo. Kwelinye icala, icaffeine ayicetyiswa kubantu abaphethwe zizifo ezithile. Ke jonga nogqirha wakho kuqala ukuze ubone ukuba ukusela ikofu kukhuselekile kuwe.
Yitya ifibre ngakumbi
Kukho imisebenzi emininzi ebonisa ukuba uninzi lwabantu lutya ukutya okunesondlo esisezantsi. Phakathi kwezibonelelo ezininzi zento (onokuyifumana kukutya okuninzi) kuya kuba negalelo kuyo gcina imetabolism yakho isebenza ngokupheleleyo.
Sebenzisa iivithamini B, i-iron kunye ne-calcium
Iivithamini ze-B, i-iron kunye ne-calcium ziphakathi kwezi izondlo ezinxulunyaniswe nokukhawulezisa imetabolism. Zonke iinkozo ziyimithombo yeevithamini ze-B, ngelixa zisiza kwisinyithi, jonga isipinatshi kunye nemidumba efana neembotyi okanye ii-chickpeas. I-calcium ifumaneka kwiimveliso zobisi nakwimifuno enjenge-broccoli okanye amakhiwane.
Kuphephe ukutya onganyamezeleki kuko
Baninzi abantu abane-lactose okanye i-gluten enganyamezelekiyo. Ukudumba okunokubakho emathunjini kwezi meko inokuthi ichaphazele kakubi imiba eyahlukeneyo yezempilo, kubandakanya nesantya semetabolism. Xa ubuza iingcali malunga nendlela yokukhawulezisa i-metabolism yakho ngokutya, bahlala becebisa ukunciphisa i-sodium kunye ne-preservatives, ezihlala ziphuphuma kuzo zonke iintlobo zokutya okuhlanganisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Isibonelelo sokutya » Indlela yokukhawulezisa imetabolism
Bala amanqatha omzimba
Izibonelelo ezisixhenxe zecranberries ezomileyo